NASA: Kedu ihe ọ bụ, njirimara na ọrụ kacha mma | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie, n'ọtụtụ oge ị nụrụ banyere NASA. Nke a bụ United States Aeronautical Space Administration (NASA, maka acronym ya na bekee) bụ ụlọ ọrụ ewepụtara maka nyocha na nyocha mbara igwe. Kemgbe ọtụtụ afọ ọ malitere, ọ hiwere ọtụtụ ọrụ iji chọpụta ebe sara mbara. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mkpa n'ụwa niile gbasara ihe gbasara mbara igwe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mkpa NASA niile.
2 Mkpa NASA
3 Ọrụ ndị ọzọ dị mkpa
Ọ bụ ụlọ ọrụ emere na 1958. Kemgbe ahụ, ọ bụ ya na-ahụ maka ịmalite ihe karịrị mmadụ iri isii na otu na mbara igwe ma ziga ọtụtụ ndị na-agụ kpakpando na mbara igwe. Ebumnuche NASA na ebumnuche oghere niile emere na afọ ndị a niile bụ inyocha oghere dị elu ma nweta ozi ndị ọzọ gbasara ya. Anyị na-anwa ịchọta ma ọ bụ chọpụta banyere ndụ ndị ọzọ na njirimara nke ihe niile gbara ụwa anyị gburugburu.
Otu n'ime ọrụ ndị kasị mkpa site na Ndị nke ụlọ ọrụ a mere ka ọ pụta ìhè bụ nke ha mere na ọnwa na 1969. Ọ bụ nnukwu ọrụ gafere n'akụkụ ụwa niile a ma onye ọ bụla na-eche ihe NASA ga-achọpụta. E nwere ọtụtụ ndị ka na-eche na njem ọnwa bụ ihe niile a montage na abụghị ezigbo.
Site na njem dị oke mkpa gaa na mbara igwe, NASA ga-akagbu ọtụtụ njem n'ihi enweghị ego. Ma ọ bụ na nyocha mbara igwe enweghịzi mmasị na ndị bi na obere ego pere mpe maka ya. Mgbe afọ 30 gachara ohere ọzọ, ọ ga-akagbu mmemme a niile. Ma Onye isi ala nke United States, Donald Trump, na-achọsi ike ịkwanye ụlọ ọrụ ohere iji zipu ozi ndị ọzọ na mbara igwe ma mee nchọpụta ndị dị egwu.
Okwesiri iburu n’uche na ugbu a, ụlọ ọrụ a abụghịzi naanị onye na-enyocha ohere. Ma, anyị ekwesịghị ileda ya anya ebe ọ bụ na ọ bụ anyị dubara n’ọnwa n’ihe dị ka afọ iri ise na otu gara aga. Na mgbakwunye, n'ime iri afọ ndị a niile, ọ bụ ọrụ maka mmezu nke nrọ mmadụ maka mmeri nke mbara igwe. Ọ bụ ezie na ọ malitere na July 51, 29, ma ọ bidoghị ịrụ ọrụ ruo Ọktọba 1 n’afọ ahụ.
Ihe niile mara banyere mbara igwe dị ugbu a achọpụtala site na ụlọ ọrụ a, nke mere na ọ dị nnukwu mkpa gbasara ịmara ụwa niile. Oge ọ bụla ihe gbasara ohere gwụrụ, anyị ga-echeta ụlọ ọrụ a. Anyị ga-ahụ ugbu a bụ njem ndị kachasị mkpa NASA mere na ndị dị mkpa maka ihe ọmụma banyere eluigwe na ala.
Njem NASA kacha mma
Nyocha 1: Ọ bụ satịlaịtị izizi nke ọdịda anyanwụ nke enyere na ndị Soviet. Ọ bụ na satịlaịtị a na-arụ ọrụ ka oghere igwe bidoro (njikọ) 30. Ngwaọrụ a tụrụ sentimita 203 n'ogologo na 16 centimeters n'obosara ma bụrụ ọrụ maka ịchọpụta na ụzarị anyanwụ na-agba mbara ụwa anyị gburugburu. Ọ gbara ụwa gburugburu ugboro puku iri ise na asatọ wee nọrọ na mbara igwe ruo afọ iri na abụọ.
Alan Shepard: Ọ bụ ya bụ onye mbụ na-enyocha mbara igwe nke NASA nke jere na mbara igwe. Ọ mere njem ụgbọ elu na mbara igwe nke Mercury Redstone 3. Ihe omume a mere na 1961.
Mmemme Apollo: Mmemme a nwere ebumnobi nwere ike ịfefe n’elu ọnwa. Ihe mmemme a malitere mgbe onye ọkwa ọkwa Onye isi ala John F. Kennedy kwuchara na ọ kpọpụtara mmadụ ga satịlaịtị. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ ruo mgbe Apollo 11 nọ na-ahụ maka ịmezu nkwa nke ịbanye na ọnwa. O mere na 1969 ma obu Neil Armstrong kwuru okwu anwụghị anwụ nke: "Nzọụkwụ dị nta maka mmadụ, nnukwu itu ukwu maka mmadụ." Ekwuru okwu a tupu ị banye na satịlaịtị anyị, Ọnwa.
Apollo 13: Nke a bụ ebumnuche nke chọrọ iduga mmadụ ịbanye na satịlaịtị anyị nke ugboro atọ. Agbanyeghị, ikuku ikuku oxygen mere ka ụgbọ ahụ nọrọ n'ihe egwu. Ọ bụ otu n'ime ọdịda ọdịda kachasị mkpa na akụkọ ntolite. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ozi ahụ apụtaghị n'ụzọ ziri ezi, ha nwere ike ịlaghachi n'ụlọ n'ihi nka nke ndị na-agụ kpakpando na ndị ibe ha. Anyi aghaghi ikwuputa oru ndi mmadu na-aru oru na uwa ndi nyere aka ilaghachi na mbara ala anyi.
Ndị ọsụ ụzọ 10: Mee 1972 na ọ bụ oghere nyocha nke abụrụla ụgbọ mbara igwe mbụ gafere Asteroid Belt wee rute Jupiter. O nwere efere nke na-egosi ihe ọmụma ụwa ọ bụla nwere ike ịchọta ebe o si bido na otu anyị bụ ụmụ mmadụ. Ihe ngosi ikpeazụ e nwetara site na nyocha a bụ na 2003. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-aga na kpakpando Aldebaran n'ime ìgwè kpakpando nke Taurus.
Ọrụ ndị ọzọ dị mkpa
Ka anyị hụ ihe ndị ọzọ dị mkpa ọzọ NASA nwere.
Oghere oghere: Ọ bụ mmemme amụrụ mgbe NASA chọrọ ka ọ belata ọnụego nyocha. Nke a bụ maka na apollo ugbo elu nwere ike iji naanị otu ugboro. O yiri ka e nwere ụgbọ ndị nwere ike iguzogide ọtụtụ njem na mbara igwe, ya mere, ha rụpụtara ụgbọ mmiri nke nwere ike iguzogide okpomọkụ nke ọnụ ụzọ na ọpụpụ nke ụwa kpatara. Mgbe 9 30 nke ọmụmụ ihe, enwere ike ịmepụta ụgbọ mmiri Columbia. Kemgbe ọ malitere ọrụ ya, a jirila ya kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ, mana ọ ghasasịrị na njem ikpeazụ ya wee gbuo ndị ọrụ 2.
Hubble Space Telescope: Tupu Hubble, onyogho anyị nwere n’eluigwe bụ telescopes ndị sitere n’ala. Ndị NASA kpebiri ịhapụ otu n’ime ngwaọrụ ndị a n’elu ụwa wee weghara foto dị nkọ banyere mbara igwe. N'ihi nlekọta mgbe niile, Hubble ka na-arụ ọrụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere NASA na uru ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » NASA